बेमौसमी तथा मौसमी प्याज खेती प्रविधि - कृषि पत्रिका
बेमौसमी तथा मौसमी प्याज खेती प्रविधि
डा. केदार बुडाथोकी आइतबार १९ असोज, २०७६	comments
प्याज मसाला बालीका रुपमा, सलाद खान, हरियो साग खान, अच खान प्रयोग हुने हिउँदे तरकारी बाली हो । यसमा स्टार्च, प्रोटान, भिटामिन सी आदि पोषक तत्वहरु पाईन्छ । प्याजलाई औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गरी यसबाट दम, बाथ निको हुनुका साथै पाचन प्रकृया पनि सहयोग गर्दछ ।
प्याजलाई समुन्द्री सतहबाट उच्च पहाडसम्म सफलतापूर्वक उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई वनस्पति वृद्धी ( बोट बढ्न ) हुन ठण्डा वातावरण र गानो बन्न अलि न्यानो वातावरण आवश्यक पर्दछ । यो बा हिउँदमा ( पुष–माघ ) जमिन माथिको भाग बढ्दछ भने जब फागुन लाग्दा र न्यानो वातावरण पाउँछ तब गानोको विकास भई गानो बढ्न थाल्दछ । यो बालीलाई १८–२२ तापक्रम राम्रो मानिन्छ ।
सेट (गानो) रोप्न श्रावणको अन्त्यदेखि भाद्रको अन्त्यसम्म बषोट समाप्त भईसकेपछि राम्रो हुन्छ । यदि वर्षाद नसिध्धीएरै अगा लगाउँदा ठूलो पानी परी बोट राम्रोसंग फैलिन पाउँदैन र रोगको प्रकोप बढी हुन्छ ।
बेमौसमी प्याज खेतीको लागि सेट उत्पादन गर्ने तरिका :
सेट भनेको सानो गानो नै हो । बेमौसमी प्याज खेती गर्न सेटबाट सजिलो र छिटो उत्पादन हुने हुनाले यो विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ । असोज देखि कात्र्तिक सम्म वा सधैंझैं प्याजको बिउ राख्ने समयमा बेर्ना उत्पादन गरी कात्र्तिक मंसीरतिर बेर्ना सार्न योग्य भएपछि वा सधैं झैं प्याज लगाउने मौसममा नै प्याज लगाउनु पर्दछ । यसरी प्याज लगाउँदा प्रशस्त प्राङ्गारिक मल (४५– डोको प्रति रोपनी रासायनिक मल आवश्यकता हेरी ) राखी निर्धारित दुरीमा (बोट–बोट १० लाईन –लाईन १५ से.मी.) लगाउने ।
प्याज लगाई सकेपछि आवश्यकताअनुसार सिंचाई गर्दै राख्नु पर्दछ । प्याज रोपेको केही समय पछि वा प्याजको गाना बुढी औंला जत्रो भएपछि प्याजको जमिन माथिको भाग वा पात निमोठेर लठ्ठी वा खुट्टाको सहायताले थिचीदिने । थिचेको ५-७ दिनमा प्याज पहेंलो सुकेजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा बोटहरु उखेलेर माटो हटाई साना साना मुठा बनाउने र यि मुठाहरुलाई सूर्यको प्रकाश नपर्ने प्रसस्त हावाखेल्ने छाँयामा झुड्याएर राख्ने यो नै यसको प्याज सेट हो । यिनै सेटलाई श्रावणको अन्त्यदेखि भाद्रको अन्त्य वा वर्षादको अन्त्य पानी नजम्ने ठाँउ खुकुलो माटो भएको ठाउँमा ड्याङ बनाई मौसमी प्याज लगाउने तरिका, सोही दुरीमा सोही विधी अनुसार नै रोप्ने ।
२–२.५ महिना पछि ति साना सेट –गाना बढेर ठूलो गाना बन्दछन् । यसरी गाना ठूलो भईसकेपछि उखेलेर बजारमा लगि बिक्री वितरण गर्ने । यो समय भनेको दशैं तिहारको समय भएकोले प्याजको माग पनि बढी हुने र बजार भाउ (मूल्य) पनि राम्रो पाईने हुँदा बेमौसम प्याज खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।
अनुमानित ८००–१००० के.जी. प्रतिरोपनी ।
झारपात हटाएर माटो खुकुलो बनाइ राख्न कम्तीमा ३ पटक गोडमेल गर्ने
पहिलो पटक बेर्ना रोप्ना साथ र पछि मौसम र माटोको अवस्था हेरि ५ देखि ६ पटक सिंचाई गर्ने ।
पानी जम्न नदिने ।
मुख्यतया प्याजमा थ्रिप्सकिरा लाग्छ र यसले प्याजको पातलाई काटेर खाने हुँदा पात सुकेर बोट मर्दछ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न निमयुक्त विषादी २ मिली प्रति लिटर मानप्मा घोलेर छर्ने । यस्तै बेर्ना सारेपछि २ पटक खरानी छर्ने ।
डाउनी मिल्डयु रोग लागेमा पातमा खैरो रङ्गको ढुसी देखापरि विरुवाको बृद्धि रोकिएर विरुवा पहेलो भइ मर्छ ।
यस रोगको नियन्त्रण गर्न २ ग्राम कपुर अक्सिक्लोराइड र म्यानकोजेव प्रतिलिटर मानप्मा घोलेर एक हप्ताको फरकमा पालैपालो ३ पटक छर्ने ।
बैजनी धब्बा लागेमा नियन्त्रण गर्ने डाउनी मिल्टयुमा जस्तै गर्ने ।
कालो पोके रोग लागेमा पातको सतहमा कालो थोप्लाहरू देखा पर्दछन् र पातबाट कालो धुलो झर्दछ ।
यो रोग नियन्त्रण गर्न एउटै जमिनमा लगातार प्याज खेती नगर्ने । रोगी बेर्नाहरू उखेलेर नष्ट गर्ने । बेभिष्टिन २
ग्राम प्रति केजीका दरले बीऊको उपचार गर्ने । यस्तै प्याजमा गानो नलाग्दै फूल फूल्ने समस्या (कोल्टिङ) पनि हुनसक्छ । यसबाट बचाउन सन्तुलन रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने, सिफारिस गरिएको जात लगाउने, राम्रोसंग हुर्किएको विरुवा मात्र सार्ने र सकभर पौष महिना भित्रै बेर्ना सारी सक्ने ।